Veloma hatreo ny delestazy dia velona tokoa ny delestazy
2008-02-17 @ 17:32 in Andavanandro
Edrey izany kabarin'ny filoha Ravalomanana tamin'ity faran'ny herinandro ity. "Veloma hatreo ny delestazy" hoy ny teniny tamin'ny fanokanana ny gropy (velomina amin'ity solika efa mihalafo ity) izay ahafahana manome herinaratra 42 megawatts araka ny fitadidiako azy. Sendra izay andro ratsy anefa ity gropy ity fa dia noporofoin'ity andro ratsy mandalo ity fa tsy foana velively ny fahatapahanjiro fa tena "velona" tokoa.
Tapatapaka ny jiro eto Antananarivo amin'izao fotoana izao, na aiza io na aiza. Ny manodidina aloha dia mihafy amin'ny fahatapahana maharitra. Ny mahavariana ary izay no ampitahako aminy dia nototosaina soa aman-tsara ny lalao iraisam-pirenena nihaonan'ny AS Adema sy ny Young African androany ary teo Mahamasina izany. Tsy orambe akory no eto andrenivohitra fa erikerika miverimberina sy rivotra somary mafimafy...
Tena efa antitra tokoa angamba ny fitaovana sa inona indray re no mety ho fialantsiny manaraka e?